Maxey tahay Mushkilladda weyn oo ku timid Facebook iyo saaxiibadiisa:) – Fatuux Tech
Fatuux Cade	Uncategorized	 March 16, 2019 March 15, 2019 1 Minute
Maalinti arbacadda aheyd 13/3 ay ku beegneyd goor-sheegtada 07:00pm geeska Africa, ayuu la kulmay facebook cilladdi ugu weyneyd abid uu la kulmo. Arintaan ayee ku tilmaameyn bartooda Twitter ka iney aheyd cillad farsamo ku imaaday servers kooda taasoo usuurta galin weysay isticmaalayaasha iney galaan application ka facebook ga misane ay wax dhigaan qaas ahaan sawir.
Cilladaan kaliya kumeysan imaanin facebook, oo waxey ku timid sidoo kale application-nada Instagram ka iyo WhatsApp ka uu leeyahay isla facebook. Waxaa adkaatay run ahaanti in la dhigo sawiro, muuqaalo iyo warbixino qoraal ah daafaha dunida intooda kalena wey saameysay.
Waxaa jiray warbixino isa soo taraayay kadib culeeska ku imaaday facebook iyo saaxiibadiisa in la weeraray oo loo geestay weerar ka loo yaqaano DDoS oo ah mid ku shuqul leh jaam gareenta iyo cariirinta adeegga laweerarayo. Shirkadda ayaa beenisay inaan wax weerar loo geysan ay kaliya aheyd cillad ku timid servers kooda ay wax ku keediyaan.
Intaas kadib habeenki khamiista soo galeysay ayuu soo hadlay ninka leh application ka Telegram ka, asagoo dhahaayo record ki ugu weynaa oo isdiiwaan galin ah inuu dhacay habeenkaas ama 24 saac gudahooda kadib markey isa soo diiwaan galiyeen tiro ku dhow 3 million oo isticmaalayaal ah.
Intaas waxey aheyd warbixin kooban oo ku saabsan arinti ku dhacday facebook, insta iyo WhatsApp. Wixii fikrad ah waad ila wadaagi kartaa walaal adigoo comment ii reebaya.
Previous Post Maxey ku kala duwan yihiin Computer Science iyo Information Technology!!
Next Post Waa maxay farqiga u dhaxeeya Systems ka jira dunidda!!!